पानी नपारेको कारण देखाउन इन्द्र भगवानलाई आदेश !!! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← ३० बर्ष नपुगेका महिला खाडी जान नपाउने
आजदेखि राणा प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीमा →
यो दुनियामा के कुरा असम्भव छ र ? हुँदाहुँदा मान्छे लाचार बन्दै स्वर्गका भगवानलाई पनि कारवाही गर्ने धङधङी प्रदर्शन गर्न पछि पर्दैन । यस्तै भएको छ भारतमा । भारतको उत्तरप्रदेश स्थित एक अदालतले वर्षायाममा समेत पानी नपार्नुको कारण पेश गर्न भगवान इन्द्रका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उत्तरप्रदेशको हरदोइस्थित एक सबडिभिजनल मजिस्ट्रेटले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशमा वर्षा नहुनुको कारण ३ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।
उक्त अदालती आदेश हरदोइ जिल्लाको सव्याजपूर तहसिलका एसडीएम सत्यप्रकाश शर्माको नामबाट जारी गरिएको छ । सत्यप्रकाशको नामको स्टाम प्याडमा लेखिएको उक्त आदेशमा उनको हस्ताक्षर समेत छ । यो आदेश स्वर्गमा रहेका इन्द्रसमक्ष पूराउन भन्दै खाममा हालेर एक कर्मचारीलाई पठाइएको छ । खाम बाहिर पत्र पाउनेको नाममा स्वर्गको ठेगाना दिएर इन्द्र भगवानको नाम उल्लेख छ ।
वास्तवमा यो समाचार पढ्दा इन्द्र भगवानलाई कारण देखाउ आदेश दिने ती सरकारी कर्मचारी बहुलाएछन् की भन्ने तपाइँले अनुमान लगाउनुहुन्छ होला । तर विचरा एसडीएम सत्यप्रकाशले त्यस्तो आदेश आफैले जारी गरेका भने होइनन् । कुनै एक अपरिचित मान्छेले यस्तो उट्पट्याङ काम गरेको रहेछ ।
र त्यस्तो आश्चर्यजनक पत्र भगवान इन्द्रकहाँ पूराउन भन्दै एक कर्मचारीको हातमा परेपछि उक्त कुराको खुलासा भएको हो । त्यस्तो उट्पट्याङ काम कसले गरेको हो ? भन्ने ’boutमा भने केही पत्तो लाग्न सकेको छैन । गलत काम गर्नेको खोजी भैरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।